कस्तो हो त नेपालमा देखिएको को’रोनाको नयाँ भे’रियन्ट ? – Sadhaiko Khabar
कस्तो हो त नेपालमा देखिएको को’रोनाको नयाँ भे’रियन्ट ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: २०:३०:२४
काठमाडौ/ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार नेपालमा नयाँ भेरियन्ट अर्थात् ‘भारतीय भेरियन्ट’को कोरोना’भाइरस फैलिएको पुष्टि गरेको छ । कोरोना परीक्षण गरिएको नमुनामध्ये ९० प्रतिशत नयाँ भेरियन्टको को’रोना फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो भेरियन्ट पहिलो पटक छिमेकी मुलुक भारतमा फेला परेको हुनाले यसलाई ‘भारतीय भेरियन्ट’ पनि भनिएको हो ।
मंगलबार प्राप्त नतिजा अनुसार ९७ प्रतिशतमा (३४ वटा) बी १.६१७.२ नयाँ भेरियन्ट र तीन प्रतिशतमा बी १.६१७.१ पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै भेरियन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै विश्वव्यापी भेरियन्ट अफ कन्सर्न घोषणा गरेको छ । हाल नेपालमा देखिएको नयाँ भेरियन्ट कस्तो भाइर’स हो ?, कुन उमेर समूहका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छ ? र अघिल्लो भेरियन्टको तुलनामा यो कति घा’तक छ ?
“भारतसँग खुला सिमाना रहेको नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र गतिमा सङ्क्र’मण बढ्न थालेपछि भारतमै देखिएको भेरिअन्ट हो कि भन्ने आश’ङ्का थियो।” “त्यो चाहिँ अहिले सत्य साबित भएको छ,” उक्त भेरिअन्टको प्रकृतिबारे “यो मानव शरीरमा अलि धेरै सङ्क्रा’मक हुनसक्छ र एन्टिबडी विकास भइसकेका मान्छेमा पनि एन्टिबडीले अलिकति कम काम गर्छ भन्ने देखिएको छ।” “तर वास्तवमै यसको के कति प्रभाव छ भन्ने कुराको निर्क्योल हुन अझ बाँकी नै छ।”
अघिल्लो भेरियन्टको तुलनामा यो बढी घा’तक छ । दोस्रो चरणको भेरियन्टको कोरोना’भाइरस सङ्क्र’मण भएर वृद्धवृद्धा धेरै उपचा’रका लागि आउनुहुन्थ्यो । तर, अहिले धेरै युवा पुस्तामा यो नयाँ भेरियन्टबाट सङ्क्र’मित भएको देखिएको छ । टेकु अस्प’तालमा सि’किस्त बिरा’मी राख्ने ठाउँ छैन । यो हिसाबले हेर्ने हो भने पहिलाको भेरियन्टभन्दा अहिलेको नयाँ भेरियन्ट बढी घा’तक छ ।
तर, भनिन्छ यो भाइ’रसले ब’न्द कोठामा बसेको एउटै सङ्क्र’मितले सयौं जनासम्मलाई एकै मिनेटमा यो भा’इरस सार्न सक्छ, के हो खासमा ? सङ्क्र’मित व्यक्तिसँग एउटै कोठामा बस्दा सङ्क्र’मितले खो’क्दा, हा’च्छ्यूँ गर्दा अर्को व्यक्तिमा स’र्ने सम्भावना बढी हुन्छ । किन भने ब’न्द कोठामा भा’इरस तीन घण्टासम्म बस्न सक्छ । एयर वान भएको कारण सङ्क्र’मण धेरै हुने देखिएको छ । एउटै परिवारका सबै परिवार सङ्क्र’मित हुनु भनेको त्यहि नै हो ।
यसले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई अ’सर गर्छ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकदेखि तीन–चार महिनाका बच्चासम्म सबै जनालाई अ’सर गर्ने गर्छ । तर, यो पटक युवा पुस्ता धेरै छन् । अरु उमेर समूहका पनि सङ्क्र’मित भएका छन् । तर, श्वासप्र’श्वासमा स’मस्या देखिएकामा धेरै युवा हुनुहुन्छ । अहिले धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरुले कोरो’नाविरुद्धको खोप लगाइसक्नुभएको छ । यस हिसाबले उहाँहरुमा यसको अस’र कम हुन्छ कि भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा मङ्गलवार पुष्टि भएको नयाँ भा’इरस सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रा’मक र जोखि’मपूर्ण रहेको अध्ययनहरूबाट पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि नेपालमा अझै पर्याप्त परी’क्षण नगरिएकोले ठोकुवा गरेर भन्न गाह्रो हुने भाइरो’लोजिस्ट डा. खड्का बताउँछन् ।
“तर अहिलेसम्म यो भाइर’सले सङ्क्र’मित बनाएको उमेर समूहलाई हेर्दा १८ देखि ५० वर्षसम्मको समाजमा जुन चलायमान उमेर समूह छ सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यही बढी सङ्क्र’मित भएको देखिन्छ । तर मृ’त्यु चाहिँ ६० वर्षमाथि बढी छ ।”
यो कुरा थाहा पाउने अझै समय भइसकेको छैन । यो भेरिअन्टलाई खोपले काम नगरेको भन्ने विषयमा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छैन । दक्षिण अफ्रिकी भेरिअन्टका सम्बन्धमा सुरुमा अनुमान गरिए भन्दा खोप बढी प्रभावकारी देखिएको छ । यूकेमा पनि अहिले सङ्क्र’मण फैलिनुका एक प्रमुख कारण यो भेरिअन्ट रहेको बताउँदै त्यहाँको सरकारले यो यूके भेरिअन्टभन्दा सजिलै सङ्क्र’मण फैलिने देखिएको बताएको छ ।
यूके सरकारको वैज्ञानिक सल्लाहकारहरूले ‘आफूहरू यूके भेरिअन्टभन्दा यो बढी सङ्क्रा’मक भएकोमा विश्वस्त रहेको र यसको सङ्क्र’मणदर ५० प्रतिशतसम्म बढी हुन सक्ने’ बताएको छ । तर यो विषयमा निश्चित रूपमा भन्न सकिने अवस्था नरहेको ती वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।